Showing 241-260 of 925 items.
काभ्रे/ च्यासिङ्खर्क–२ च्याल्टीका दुबै मृगौला पिडित मनोज कुमार रुम्बाको उपचारका लागि विभिन्न देशमा श्रम गरेर बसेका नेपालीहरुले संकलन गरेर पठाएको रु. १ लाख १० हजार रकम शनिवार बनेपामा पिडितलाई प्रदान गरेको छ । नाम्सादिम छोरङ�
पूर्व प्रहरी मञ्चले पक्षघात भएका विद्यार्थीलाई सहयोग
काठमाडौँ/ पूर्व प्रहरी परिवार मञ्चले गोकर्णेश्वरको मेरुदण्ड पक्षघात समूहलाई दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको छ । मेरुदण्ड पक्षघात भएका विद्यार्थीलाई स्वावलम्बन जीवन पद्धति र आवास सञ्चालनका लागि उक्त सहयोग गरिएको हो । प्र
प्रदेश ५ मा बुधबार सार्वजनिक विदा
बुटवल/ प्रदेश नम्वर ५ को सरकारले बुधबार मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुको पर्व बकर इदका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने निणर्य गरेको हो । भोली प्र�
मोरङ/ प्रदेश नम्बर एकमा भदौ ६ गते बुधबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । प्रदेश एकको प्रदेश सरकारले बकर इदका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी द
काठमाडौं/ वायुसेवाको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर कम्पनीको चार्टर उडानमा भाडादर तोक्ने भएको छ । सरकारको कुनै मापदण्ड नभएका कारण नेपाली हेलिकप्टर कम्पनीहरुले मनलाग्दी भाडा असुल्दै आएका थिए। प्राधिक�
सुखीपुर नगरका सात उत्कृर्षित विद्यार्थीलाई सम्मान
रोयाण्टर मण्डलसिरहा, २० साउन / राम लखन मेमोरियल ट्रष्ट सुखीपुरले एसईई परिक्षा २०७४ मा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरेको छ ।सुखीपुर नगरका सबभन्दा बढी जी.पी.ए ल्याएका एकै स्कुलका सात विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरेको हो । कार�
धरान/ भारतको जोगबनीदेखि किमाथाङ्का सम्मको बहुुप्रतिक्षित सडकखण्डको निर्माण जारी छ । पूर्वका विभिन्न शहर छुँदै जाने उक्त राजमार्गलाई धरानको मुुख्य बजारबाट बाइपास गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस जारी छ । कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको स�
दयाराम ट्रेडर्सको शोरुम नेताचोकमा
इटहरी/ मोरङको विराटचोकमा रहेको दयाराम अटो ट्रेडर्सले आफ्नो दोस्रो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच ट्रेडर्सको दोस्रो शाखा दीप अटो सेन्टर ग्रामथान गाउँपालिकाको नेताचोकमा सञ्चालनमा आएको हो । सो शाखाको उद
टिभीएसको ८१ औं शोरुम विराटचोकमा
इटहरी/ जगदम्बा अटोमोबाइल्सले टिभिएस कम्पनीको ८१ औं शोरुम मोरङको सुन्दरहरैंचामा सञ्चालनमा ल्याएको छ । टिभिएसको ८१ औं डिलरको रूपमा सुन्दरहरैंचाको विराटचोकमा मनकामना अटोमोबाइल सञ्चालनमा आएको हो । सुन्दरहरैंचाका नगरप्रमुख श�
विराट अटोले नेताचोकमा शाखा खोल्दै
इटहरी/ विराट अटो सेन्टर विराटचोकले आफ्नो शाखा मोरङको नगरोन्मुख बजार ग्रामथान गाउँपालिकाको नेताचोकमा खोल्ने भएको छ । विराट अटोका प्रोप्राइटर दयाराम खवासका अनुसार साउन १७ गते शाखाको उद्घाटन हुने छ । शाखाको उद्घाटनको अवसरमा सा